ဆာဗာက ဒေါင်းပြန်၊ အာဏာတွေနဲ့ မကောင်းကြံ၊ ဘလော်ဂါတွေက ခေါင်းခံ၊ အာရုံတွေက ဗြောင်းဆန် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဆာဗာက ဒေါင်းပြန်၊ အာဏာတွေနဲ့ မကောင်းကြံ၊ ဘလော်ဂါတွေက ခေါင်းခံ၊ အာရုံတွေက ဗြောင်းဆန်	Posted by mm thinker on January 29, 2008
Posted in: IT & Blogging, Politics.	Tagged: Blogging, Media, Politics.	Leaveacomment
ဂျီတော့ခ် ဖွင့်တုန်း မက်ဆေ့ခ်ျရောက်လာတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း လွတ်ကျတဲ့မြို့တော်ကို စစ်အစိုးရက ကောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ သဲသဲကွဲကွဲ ချက်ချင်းမသိရ။ စောစောစီးစီး စက်ရပ်သတင်းအဖြစ်တက်လာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ အချက်အလက်တွေ မှားနေသည်ဟု သိရသည်။ ဒါက အာဏာနဲ့ အကြောင်းဖန်သမျှ ဘလော်ဂါတွေ ခေါင်းခံရမလို ဖြစ်နေသည့်ကိစ္စ။ အာရုံတွေက ဗြောင်းဆန်
နောက်နေသည့်အာရုံက ပိုနောက်သွားသည်။ အာဏာရှင်တွေ ထင်တိုင်းကြဲသောတိုင်းပြည်တိုင်း ဒီလိုတွေချည်းပါပဲ။ မနိုင် နိုင်ရာ ကိုင်ကြမည်။ ဖင်မြဲဖို့ ဘာမဆိုလုပ်ကြမည်ပင်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်းက တခြားဘလော်ဂါတွေလည်း မျက်ခုံးလှုပ်ကြမည်။ IT အပေါက်ကို ဘယ်လို ပိတ်နိုင်မလဲ၊ ကြည့်လိုက်ချင်သေးသည်။ လူဆိုတာ ဖိလေကြွလေဆိုတာ…။ ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေပါမည်။ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ရိုက်ချိုးတာလောက် မုန်းတာမရှိ။ အတွေးအခေါ်ဆိုတာ သတ်လို့ မရကောင်းဘူး။ အစိုးရအမည်ခံထားတာဟာ ဒီအရည်အဖတ်မရ၊ ဆန်စဉ်ရာ ကျည်ပွေ့လိုက်ထောင်းနေရုံနဲ့ ပြီးနေတော့တာပါပဲ။ ပုံပြင်တွေ လာမပြောနဲ့။ စိတ်ပိန်တယ်။ ဒါတွေပေါင်းလိုက်တော့ အာရုံတွေ ဗြောင်းဆန်နေတော့တာပဲ။ Rate this:Share this:EmailTwitterFacebookPrintRedditLike this:Like Loading...
← ယာယီကဗျာဆရာ၏ ထာဝရပုံရိပ်မှတ်တမ်းများ (နိဂုံးပိုင်း)	Calling Ads for ExtMgz →	0 comments on “ဆာဗာက ဒေါင်းပြန်၊ အာဏာတွေနဲ့ မကောင်းကြံ၊ ဘလော်ဂါတွေက ခေါင်းခံ၊ အာရုံတွေက ဗြောင်းဆန်”
စိုးထက် - Soe Htet ! on February 3, 2008 at 1:35 am said:
လမ်းညွှန် ပေါ့လေ😛 အခုမှ ဒေါက်စိုး ဆိုတာ … ဘယ်သူလဲ သိ သွားတာ … ဟိ … အားလုံးက ဒေါက်တာ ထက် … ပဲ ခေါ်ကြတာဗျ😛
Reply	layma on February 3, 2008 at 4:41 am said:
Reply	ကဒေါင်းညင်သာ on February 3, 2008 at 9:04 am said: